noocyada gabdhaha loo gudo | Xidig Portal for all
Xidig Portal for all
noocyada gabdhaha loo gudo
Nooca ugu khafiifsan ama ugu sahlani waa marka haragga yar ee kintirka dushiisa ah la jaro. Kintirku waa qayb aad u dareen badan qaybaha jirka dumarka. Gudniinka noocan ah waxaa la sameeyaa marka gabadhu ay jirto 7cisho ilaa 12sano, waxayna ku xirran tahay qoyska gabadha iyo caadada bulshadeeda. Dadka Muslimka ahi waxay u yaqaaniin noocan isaga ah sunna. Nooca labaad waa marka kintirka oo dhan la jaro faruuryaha inta gudaha xigtana la hoolo oo xagga sarena la isaga adkeeyo. Faruuryaha guduhu waa maqaarka ku wareegsan siilka iyo kintirka. Mararka qaarkood qaybta sare ee siilka ayaa laysku tolaa.Dadka qaarkood waxay u yaqaanaan noocan “excision” oo macneheedu yahay “xasuuqid”. Waxaa lagu sameeyaa gabadhu marka ay jirto inta u dhaxaysa 6sano ilaa iyo qaangaadhkeeda.Nooca ugu adag ama ugu daran waxaa la yidhaahdaa gudniinka fircooniga ah.Waxaa la jaraa kintirka dibnaha inta xagga gudaha xigtana waa la hoolaa inta kor la isaga xejiyofaruuryaha siilka oo dhanna waa la isku tolaa waxaa laga reebaa oo kaliya dalool aad u yar oo xagga hoose oo siilka ah. Sidoo kale waxaa lagu sameeyaa gudniinkan gabadhu mark ay jirto inta u dhaxeysa 6sano ilaa iyo qaangaadhkeeda. Gudniinka habalha waxaa kaloo loo yaqaannaa “naafaynta xubnaha taranka dumarka” oo afka qalaad lagu yidhaahdo “female genital mutilation” (FGM).
Gudniinka gabdhuhu miyuu saameeyaa caafimaadka?Gudniinku wuxuu u saameyn karaa caafimaadka dumarka siyaabo kala duwan, waxayna ku xirran tahay nooca gudniinku yahay. Waxay iyadana ku xirran tahy meesha lagu sameeyey. Sidoo kale qof walba gabar ama qof dumar ahba waxaa laga yaabaa inay si kala duwan uga fal celiyaan. Dumarkoo dhammi waayo arag uma noqdaan wax dhibaato ah. laakiinintooda badani dhibaato ayay kala kulmaan.
gabdhaha in lagudo ayan qabaa aniga lkn waa in laga jaraa kaliya kintirka ooo aanan latolin sidaa aya sax ahsunadana waafqansan.
anigu waxaan qabaa inaanba la gudin waayo wax dhib ah ma ahan, hadii taasi aan la samayn karin ha la sameeyo qaabka ah in uun wax yar laga goyo xuubka kore ee clitoriska, labada qaab ee kale waa labo qaab ee jir dil ku samaynaya gabadha xubnaheeda taranka caafimaad ahaana u dilaya waa qaab laga laga soo min guuriyey shaydaankii wayna ee fircoon ee ahayd inaysan tarmin ragu....
su al ayan khaba aniga mid firconiga ah waxad dhahden in lorebo mel yar o inta danba ahi intasi mageli karta xubinta raga mida kale gedka bagra jibintisa miyow ubahan yahay in laga jabiyo inta hore walal fafahin dherad iga siya waxan ku dhibtoday gabarteyda marka jawaba ayan idinka suga dhaqso ahi
Majirtaa cudur kintirka ku dhacaa?
حكم وأشعار مصورة
حلول في تصميم المواقع
Qaabka ugu fiican galmada Consult as family
Dareenka naasaha haweenka Sensations Girls
Xidig.com. Powered by Blogger.